Home News Kulankii xalay ee MW Waare iyo Fahad Yaasin maxaa ka soo...
Waxaa xalay kulan saacado qaatay wada yeeshay Agaasime ku xigeenka Hay’adda NISA iyo Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare. Kulankaan oo dadka laga qariyay ayaa waxaa looga hadlayay sidii MW Waare qayb weyn uga qadan lahaa dagaalka ka dhanka ah Madaxweyne Axmad Ducaale Xeef. MW Waare ayaa go’aansaday in uu noqday mid u adeega ujeedooyinka dowladda Qatar iyo Fahad Yaasin. Waxaana muuqato in uu majlis u noqday qorsha la doonayo in lagula dagaalo Dowlad Goboleedyadda iyada oo la istcimaalayo dhaqaalaha ay balan qaadeen sirdoonka Dowladda Qatar.
Previous articleDhageyso:Cabduulahi Sufurow”Waa been abuur inaan diday Xilka qaadista la igu sameeyay”
Next articleHotel Jazeera oo bishii Agoosto ku dalacay W. Maaliyadda iyo xafiiska RW Kheyre lacag gaareysa $450,000
Waa Kuma Gudoomiyaha Cusub Ee Baarlamaanka??
Dagaal Beeleed ka taagnaa gobolka Sh-hoose oo xal laga gaaray